Ukuleqa umsila: IHarry Potter kunye noMsila omde | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 29, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
NgoMgqibelo uqala ngokuma kwam rhoqo ukuya Imida. Ndiyalele Imephu zikaGoogle iHacks isukile eAmazon ukuze ndisebenze kwezinye zeendlela ezingahambelani nomgaqo we-ResortPub kule mpelaveki. Ndiyalele ukuhambisa iintsuku ezi-2 kodwa incwadi ayifikanga… ilandelelwe eColumbus, OH. Ndicinga ukuba eli lixesha lokuqala ukuba ndingayifumani iodolo yam kwiAmazon ngexesha - ndiyathemba ukuba ayizukwenzeka kwakhona.
Ndibuyele kwindawo yam… ndikwimida kwaye kwenzeka ukuba ndiyibone incwadi Ukuba uHarry Potter waqhuba umbane ngokubanzi. Ngoku ndifunda Umsila omde kwaye ithetha ngombono onomdla wokuba ubuchwephesha buqhubele phambili kwiikhompyuter, kwi-intanethi, kunye nokusasazwa kuqhuba ukuthengisa iimveliso ezingekho kwiipesenti eziphezulu. Yincwadi enkulu. Ndisandul 'ukufunda Freakonomics, oku kukuncoma okugqibeleleyo.
Njengoko ndijongile isihloko se Ukuba uHarry Potter waqhuba umbane ngokubanzi, Andinakukunceda kodwa ndikufumanise kunomdla ukuba umbhali uTom Morris, ngelixa umbhali osungulwe ngovavanyo olukhulu, wasebenzisa impumelelo kaHarry Potter ukutyhala incwadi yakhe 'phezulu umsila'. Abandwendweli eAmazon abakhangela Harry Potter bayakufumana le ncwadi kwi # 30 kwiziphumo zokukhangela. UHarry Potter unokuba lolona chungechunge lweencwadi olunempumelelo ngalo lonke ixesha. Abantwana nabazali ngokufanayo bemi emgceni kwaye bayilambele incwadi elandelayo. Njengoko besebenzisa iAmazon, andikwazi ukuzibuza ukuba mangaphi amawaka abo athenga le ncwadi.
Ndikwanomdla wokuba esi yayisisicwangciso sokuthengisa ngabom soMnumzana Morris kunye noMshicileli wakhe! Ngokubanzi, incwadi yakhe ikalwe kwi # 66,951 kwiAmazon ngelixa incwadi yakhe yokugqibela ingu # 154,295. Ngaba uTom Morris waba ngumbhali ongcono kule minyaka mi-3 idlulileyo? Okanye ngaba incwadi yakhe yamgxotha uHarry Potter kwaye yamqhubela phambili kwi-Long Tail?
URobert Scoble kunye no-Shel Israel wathetha malunga nalo mkhuba wenzeka nge Incoko ezihamba ze. Kuyathakazelisa ukucinga ukuba oku kunokusetyenziswa njengesicwangciso, nangona kunjalo!
Imephu kaGoogle API: Khangela, Tsala kwaye uhlaziye indawo endikuyo
Agasti 3, 2006 kwi-9: 41 AM
Molo Douglas! Enkosi ngokuqaphela incwadi! Andizange ndifunde naliphi na ibali likaHarry Potter kude kube malunga neminyaka emi-3 okanye emi-4 eyadlulayo, isithandi sobulumko esincinci sandibiza ukuba sindibuze ukuba ndibhale isincoko sencwadi awayezakuyihlela- uHarry Potter kunye nefilosofi. Andinalo ixesha lokuthatha inxaxheba kule projekthi, kwaye ndandingathandi, kodwa wayengumfundi wesinye sezifundo zam ze-PhD endizithandayo, ukuze asisikelele yena notitshala wakhe, awayebhalisile ukuba anditsalele umnxeba malunga projekthi, ndivumile ukuba okungenani ndijonge incwadi yokuqala yoMbumbi. Ndatsalwa ngokukhawuleza, ndaza ndazifunda zonke izihlandlo ezi-6 inye! Ndabhala isincoko sencwadi yonjingalwazi omncinci emva koko andayeka ukubhala. Kwakukho ukuqonda okuninzi okumangalisayo ngobomi kunye nobunkokeli kula mabali athandwayo kakhulu ekungekho mntu wayethetha ngawo. Ngokukhawuleza bendinamaphepha angama-300-incwadi! Yayibizwa ngokuba "nguHarry Potter kunye nentsingiselo yoBomi" kodwa umhleli ophambili kwishishini, umhlobo wearhente yam, wayifumana, wabona inqanaba lobunkokheli kuyo, wandibuza ukuba ndingayiguqula na incwadi ingayincwadi yeshishini njengesikhokelo sobomi. Ndandithandabuza ekuqaleni, kodwa ngelixa ndiphinda ndiyifunda ndaye ndaqiniseka.
Emva kokufundisa e-Notre Dame 15 unyaka kwisebe lefilosofi, ngoku ndithetha namaqela amakhulu oshishino kwilizwe liphela. Umhleli waseDoubleday wayesazi ukuba isihloko seshishini siza kubhenela abaphulaphuli bam. Uthe "Wonke umntu eDoubleday uyayithanda incwadi yakho yonyaka we-1997 ukuba u-Aristotle Ran General Motors kwaye nayo yonke i-CEO endiyaziyo, ungavuma ukwenza isihloko esifanayo?" Ndenze uphando oluninzi ndenza njalo neDoubleday, kwaye savumelana ukuba uHarry Potter Ran General Electric njengendlela emnandi yokuhamba.
Iinkampani ziye za-odola amawaka eekopi, ii-CEO ziye zayithatha zaze zathenga zonke iingxelo zazo kunye nee-execs, kwaye ngoku uHarry Potter fandom uyifumene. Ke yincwadi yam yokuqala ukusukela ngo-97 ukubetha kuluhlu oluthengisa kakhulu (ngeli hlobo iJenali yeWall Street, i-CEO yokufunda, iNcwadiJive).
Esi sisixhobo esinomdla sokuthengisa-isihloko esichazayo, esivusa umdla, esicacileyo, esimnandi, nesinomdla kwiincwadi ezimbini ezahlukeneyo zokuthenga kuluntu.
Kwaye-ngendlela-ndicinga ukuba zonke iincwadi endizibhalayo zezona zibalaseleyo endakha ndazenza, kodwa emva kweminyaka ndibathanda bonke ngokulinganayo njengabantwana.
Enkosi ngokuqaphela !!!!!
Juni 4, 2007 ngo-11: 11 PM
Uthandile eli nqaku likaHarry Potter. Ukhe wajonga iiForam zikaHarry Potter yeyona ndawo yokuqala yathumela iindaba malunga neMuvi yaseHarry Potter yamva nje, uHarry Potter kunye noMyalelo wePhoenix.